About Us - Shandong Honglu Heavy Imboni Co., Ltd
Imayini ukwakhiwa imishini
Udizili ezokuthutha imoto
izimayini wadonsa abantu imoto
izimayini umyalo imoto
izimayini isondo Loader
New imoto amandla ezokuthutha
Okunye injongo izimoto ezikhethekile
izimoto Udizili ezokuthutha
uwoyela ithangi iloli
Shandong honglu esindayo umkhakha co., LTD., Kwenyunyana Shandong tang iqembu, iqembu co., LTD., Eyasungulwa ngo-1956, abasebenzi inkampani abantu abayizinkulungwane ezintathu, lobuchwepheshe ucwaningo nentuthuko iqembu labantu abangaphezu kwamakhulu amathathu, seyithuthuke imigqa ukukhiqizwa , lokunameka workshop, Welding workshop, nginyathela workshop, unelwazi ocebile ekukhiqizeni, ucwaningo nentuthuko.
ucwaningo yenkampani yethu kanye nokuthuthukisa umkhakha esindayo iyona yokukhiqiza bokuqala yasekhaya kwemayini ukuqhuma-ubufakazi inkampani ubunjiniyela imishini, yonke inkampani nobuchwepheshe bayo ucwaningo ezimele nokuthuthuka, ngamalungelo ezimele empahla, iyona izimayini main rubber_tyred ezokuthutha ilungu likasoseshini, kuyinto evunywe inhlangano umkhakha sesilinganiso senzuzo amabhizinisi.
Isungulwe ekuqaleni we AnBiao wahlanganyela umkhiqizo isitifiketi, ziqu isitifiketi, zonke imikhiqizo kazwelonke zokuphepha isikhungo eziyinkimbinkimbi audit yomsebenzi osizayo, ingaphansi amabhizinisi bokuqala yasekhaya uthole okwami ​​isitifiketi ukuqhuma-ubufakazi. Through the kazwelonke zokuphepha ukuhlolwa isikhungo kanye nokuphepha kokuqondisa bureau isayithi ngokuhlanganyela ukubuyekeza, ngokusebenzisa inkampani isethi ephelele idatha yomsebenzi osizayo, imishini ehlukahlukene, umthamo production, futhi ezingaphezu kuka-100 isofthiwe kanye nemikhiqizo hardware.The yenkampani kabanzi yamalahle, nsimbi phosphate , itshe-nsimbi ne gold mine. Imoto nezingxenye zalo, izinhlelo kanye neminye imiklamo ziye ukhishwa isitifiketi patent kazwelonke.
Njengoba izidingo zokuphepha kazwelonke ka yamalahle kanye okwami, imayini beba more and okusezingeni eliphezulu nokufuneka of imishini zokuthutha, ukukhiqizwa yenkampani yethu yokuqhuma-ubufakazi futhi ezimanzi imishini unyathela amabhuleki zokuthutha baphile ngokuvumelana nezimfuneko kazwelonke ukuphepha okwami, kuyinto umkhiqizo lwakho olukhethile iqembu eziningi ezinkulu. Inkampani kusekelwe ekhaya uya emhlabeni. Ukulandela isu komnotho wezwe, ku supply ohlangothini kabusha kancane kancane kuphinde entsha imboni yezamandla, ezinzile izimayini emakethe yasekhaya, qhubeka ukuthi uthuthukise imikhiqizo emisha amandla ukuthuthukisa ukuqaphela umkhiqizo kanye yokuthengisa. Ngezenzo isakhiwo Asia emaphakathi, eningizimu-mpumalanga emakethe Asia angaphandle. Futhi eRussia, Myanmar, Philippines nakwamanye amazwe baye basungula ubudlelwane ibhizinisi.
Shandong honglu esindayo umkhakha co., LTD.Located ezimayini ubunjiniyela r & d womshini imishini kanye izingxenye, ukunamathela "umthwalo, emisha, okuthembekile" umqondo yentuthuko, banamathele "ukwenza okuhle, futhi banamandla ukwenza eside" ukuthuthukiswa kwenqubomgomo, uzibophezele babe yasekhaya lokuqala ekilasini, omhlaba ubunjiniyela bodumo imishini amabhizinisi.
Ikheli: akukho . 1 endleleni meishan, Zibo ukuthuthukiswa komnotho zone, Zibo idolobha, isifundazwe Shandong.
No.1 umgwaqo meishan, ukuthuthukiswa komnotho zichuan, Zibo, Shandong, China